နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ကြာသည်အထိ လက်သည်မပေါ်သေးတဲ့ လုပ်ကြံမှုကြီး - Focus Myanmar
May 15, 2019 By Myanamr Plus in ဆောင်းပါ။, ဖြစ်ရပ်မှန် Tags: လုပ်ကြံ
ဦးတင်ထွဋ်သည် ကိုလိုနီခေတ်၌ မြန်မာလူမျိုးထဲမှ ပထမဆုံး အိန္ဒိယပဋိဉာဉ်ခံဝန်ထမ်း (အိုင်စီအက်စ်)ကို ရွေးချ ယ်ခန့်ထားခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။ ဦးတင်ထွဋ်ကို အဖ အရေးပိုင် ဦးဖိန်း (K.S.M., A.T.M) အမိ ဒေါ်မိမိတို့မှ မြင်းခြံမြို့တွင် ၁၈၉၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် နေ့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည် ။ မွေးချင်း (၇)ယောက် အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည် ။ ညီအစ်ကို ၄ ဦးစလုံးမှာ အင်္ဂလန်မှ ဘားအက်လော (Bar.at. Law) ဝတ်လုံ ဘွဲ့များရ၍ ထူးချွန်ထက်မြက်ထင်ရှားသူများဖြစ်သည်။ ဦးတင်ထွဋ်၏ ညီနှင့်ညီမများမှာ တရားသူကြီးနှင့် ဥပဒေ ပါမောက္ခ ဦးကျေ်ာမြင့်၊ သံအမတ် ကြီး နှင့် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်အကျိုးဆောင် ဦးမြင့်သိန်း၊ မြန်မာစာပေ မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောက်စာဖတ် ဒေါ်ခင်မြမူ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ကမ္ဘာသိ မြန်မာစာပေပညာရှင် ဒေါက်တာထင်အောင်၊ ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးနှင့် ဘီအီးဒီဘွဲ့ရ ခေတ်စမ်းစာဆို ဒေါ်ခင်စောမူ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှူး ဒေါ်တင်စောမူတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဦးတင်ထွဋ်သည် ငယ်စဉ်က ရန်ကုန်မြို့ စိန့်ပေါလ်အထက်တန်းကျောင်း၊ ပဲခူးမြို့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်ကောလိပ်တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ကောလိပ်တွင် လပိုင်းမျှသာနေ၍ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ဂျူးဝစ်ကောလိပ်၊ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် ကွင်းန်ကောလိပ်၊ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန် ဒဗ္ဗလင်ထရီနတီကောလိပ်တို့တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည် ။ ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မက် စ်သစ်ထရစ်ပို စာမေးပွဲကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၁၇ ခုနှစ် အီကောနေ်ာမစ်ထရစ်ပို စာမေးပွဲကိုလည်းကောင်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အက် ဆေး ပြိုင်ပွဲ၌ ဟူးစ်ပရိုက်ဆု ရရှိခဲ့သည် ။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ် ဘီအေဘွဲ့(ဝိဇ္ဇာဘွဲ့)ကို သင်္ချာ၊ ဘောဂဗေဒ ဂုဏ် ထူးတို့ဖြင့် ရရှိခဲ့သည် ။ ၁၉၂၀ ပြည့် နှစ်တွင် ဒဗ္ဗလင်ထရီနတီ ကောလိပ်မှ ဘီအေ (တီ၊စီ၊ဒီ)နှင့် အမ်အေ (မဟာဝိဇ္ဇာ) ဘွဲ့များ ရရှိသည်။ ထို့နောက် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်မစ်ဒယ်တန်ပယ်လ် ဥပဒေကျောင်းမှ ဘာရစ်စတာ (Barrister at Law) ဝတ်လုံဘွဲ့ ရရှိခဲ့ သည် ။ အင်္ဂလန်ပြည်တွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ် အားကစားဘက် ၌လည်း ထူးချွန်သည်။ ဒါးလ်ဝစ်ကောလိပ် (Dulwich college) ရတ်ဘီအားကစား လက်ရွေးစင် (ပတ်ဘလစ်စကူးလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ)၊ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ် ရတ်ဘီအသင်း ခေါင်းဆောင်နှင့် လှေလေ်ှာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ် ခံရသည်။
၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများထဲမှ အိန္ဒိယစစ်တပ်ကေ်ာမရှင် အရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများထဲမှ ပထမဆုံး အိန္ဒိယပဋိဉာဉ်ခံဝန်ထမ်း (I.C.S) အဖြစ် ရွေးချ ယ်ခံရသည်။ ၁၉၁၉ မှ ၁၉၂၁ အထိ အောက် စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် ၌ အလုပ်သင်အဖြစ် ပညာသင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် နေ့တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည် ရောက် ရှိသည် ။ ၁၉၂၂ တွင် ပဲခူးတိုင်း ကမာဝဲ မှ ဦးဘိုးမင်း၏သမီး မသန်းတင် နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် ပဲခူးဝန်ထောက်၊ ၁၉၂၄ တွင် သစ်တောဌာန အတွင်းဝန်ထောက်၊ သစ်တော ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၂၅ တွင် ဘဏ္ဍာရေး အတွင်းဝန်ထောက်၊ ၁၉၂၆ တွင် အခွန်တော် နှင့် သဿ မေဓ စုံစမ်းရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၂၇ တွင် သမဝါယမ တွဲဖက်ရီဇစ္စတြာဝန်ထောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၉၃၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့နှင့် ဆင်းမလားမြို့တွင် အိန္ဒိယအစိုးရစက်မှုနှင့် အလုပ်သမား ဌာန အတွင်းဝန်ထောက်၊ ဒုတိယ အတွင်းဝန် တွဲဖက်အတွင်းဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန် ၁၉၃၃ တွင် ပြည်အရေးပိုင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၃၅ တွင် အတွင်းဝန်များရုံး (နောင်ဝန်ကြီးများရုံး) ဘဏ္ဍာရေးဌာန ဒုတိယ အတွင်းဝန် အဖြစ်လည်းကောင်း ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ တဖက်မှလည်း ၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒုတိယ အဓိပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဦးတင်ထွဋ် (ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဦးတင်ထွဋ်တို့၏ နောက်မှ မျက်မှန်နှင့်လူသည် ဂဠုန်ဦးစော ဖြစ်သည်။)
၁၉၄၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် နေ့တွင် နန်းရင်းဝန် ဂဠုန်ဦးစော၏ အတွင်းဝန်အဖြစ် ဂဠုန်ဦးစောနှင့် အတူ မြန်မ့ာလွတ်လပ်ရေး အရေးဆိုရန် အင်္ဂလန်ပြည်သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အောက်တို ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့ လန်ဒန်မြို့သို့ရောက် ရှိပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် နေ့တွင် ဗြိတိသျ နှန်းရင်းဝန် ဆာဝင်စတန်ချာချီနှင့် ဦးစောတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် အတူတက် ရောက်ခဲ့သည်။ ချာချီနှင့် ဦးစောတို့ နှစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေ်ာလည်း မြန်မ့ာအရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျ တို့ဖက် မှ မည်သည့် ကတိကိုမှ မပေးခဲ့ချေ ။ ချာချီ၏ တင်းမာသောသဘောထားနှင့် အခြားဗြိတိသျှ ခေါင်းဆောင်များ မရေ မရာပြောဆိုမှုများသည် ဦးစောကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဦးစောသည် ဗြိတိန်မှ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုသို့ဝင်၍ သမ္မတတဖရန်ကလင်ဒီရူးစဗဲ့အား ဝင်တွေ့ရာတွင် လည်း ဦးတင်ထွဋ်သည် အတူလိုက်ပါ ခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်သမ္မတက ဗြိတိသျ ကိုလိုနီနယ်တစ်ခု၏ အရေး အရာများတွင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ရန် လက်တွန့်နေသည့် သဘောထားကို သိရပြီးနောက် ဦးစောသည် ဦးတင်ထွဋ်အားချန်ထား၍ အမေရိကန်ရှိ ဂျပန်သံရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်အား တကိုယ်တေ်ာ ဝင်ရောက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဦးစောသည် အမေရိကန်မှအပြန် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ လစ်စဘွန်းမြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန် ကို တဦးတည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြန်သည်။ ဦးစောနှင့် ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်တို့ ပြောဆိုခဲ့သမျှဗြိတိသျှ ထောက်လှန်းရေးက ကြားဖြတ် ဖမ်းယူပြီး စကားဝှက်များဖေ်ာထုတ် ၍ လန်ဒန်အစိုးရထံ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
ဦးစောနှင့် ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်တို့ ပြောဆိုချက်အကျဉ်းချုပ်မှာ ဂျပန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကျူးကျေ်ာ ဝင်ရောက် လျှင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့က ဗြိတိသျ တို့ကို ဂျပန်တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ထကြွပုန်ကန်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အနေဖြင့် ဂျပန်ကို တတ် နိုင်သမျှ အကူအညီပေးမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ ဗြိတိသျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဦးစောနှင့် ဦးတင်ထွဋ် နှစ်ဦးကို ဖမ်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဦးစောတို့ စီးလာသောလေယာဉ် ပါလက်စတိုင်းပြည် (ယခုအစ္စရေးနိုင်ငံ) ဟိုင်ဖာမြို့သို့ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လေယာဉ်ဆင်း သည်နှင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဦးစောအား အာဖရိကတိုက် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံသို့ ပို့လိုက်ပြီး ဦးစော သည် စစ်အတွင်းကာလတစ်လျှေက် ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် နေ့အထိ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ဦးတင်ထွဋ်ကိုမူ ဗြိတိသျတို့က ပြန်လွှတ် ပေးပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတ်ခွာ လျက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆင်းမလားမြို့၌ ဖွဲ့စည်းထားသော ဆာဒေါ်မန်စမစ်၏ စစ်ပြေးအစိုးရအဖွဲ့၌ သွားရောက် ပူးပေါင်းစေသည်။ သို့ဖြင့် ဦးတင်ထွဋ်သည် ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၆ ခုနှစ်အထိ မြန်မာပြည် စစ်ပြေး ဆင်းမလား အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် နေ့မှ ၇ ရက် နေ့အထိ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကန္ဒီမြို့၌ အရှေ့တာင်အာရှဆိုင်ရာ မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်သေနာပတိချုပ် လောဒ့်လူဝီမောင့်ဘက်တန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် စစ်ပြေးအစိုးရ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးတင်ထွဋ်လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံဆာဒေါ်မန်စမစ်သည် မြန်မာပြည်အစိုးရ၏ အကြံပေးအရာရှိ ဦးတင်ထွဋ်ကို ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်သို့ စေလွှတ်ပြီး ဘုရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးအစား ၁၁ ဦးသာခန့်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားစေသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နေ့က ဗြိတိသျအစိုးရက ဦးတင်ထွဋ်အား Order of British Emperor (O.B.E) ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် အိုင်စီအက်စ် ဝန်ထမ်းဘဝမှ နှုတ်ထွက်၍ The Burma Review ဂျာနယ် နှင့် New Time of Burma သတင်း စာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၄၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဖဆပလအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦး ဆောင်၍ ဘုရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းသောအခါ ဦးတင်ထွဋ် သည် ဘုရင်ခံခန့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တေ်ာဌာန၌ ဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့ ဗြိတိသျ အစိုးရနှင့် မြန်မ့ာလွတ်လပ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးရန် သွားရောက် သောအခါ ဦးတင်ထွဋ်သည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရေးအတွက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့ သည် ။ ထိုနှစ်မှာပင် တောင်တန်းဒေသ စုံစမ်းရေးကေ်ာမတီ (Frontier Area Enquiry Committee)တွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သခင်နု၊ ဗိုလ် ခင်မောင်ကလေး၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့နှင့်အတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည် ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက် နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တေ်ာ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ဟင်္သာတမြို့မှ ဝင်ရောက် ယှဉ် ပြိုင်ရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေး ကေ်ာမတီ အဖွဲ့ဝင်၊ အခြေခံဥပဒေအချောကိုင် ကေ်ာမတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည် ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန် မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ ကေ်ာမရှင်နာမင်းကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
ထို့နောက် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်စ်ရန်၏ အမှုဆောင် ကောင်စီ (ဝန်ကြီးအဖွဲ့)၌ ဌာနလက်ကိုင်မရှိ ဝန်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည် ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သခင်နု ဦး ဆောင်သော ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း ကောင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ သြဂုတ်လ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်၍ ဗိုလ်မှူးချုပ်ရာထူးဖြင့် အရန်လက်နက်တပ်များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည် ။ ဦးတင်ထွဋ် ကဲ့သို့ ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးအား စစ်တပ်၏မြင့်မားလှသော ရာထူးတစ်ခု ပေးအပ်ခံရခြင်းမှာ ထူးဆန်းကောင်း ထူးဆန်း ပေလိမ့်မည် ။ သို့သေ်ာ သူ့ဘဝသည် ငယ်စဉ်ကပင် စစ်မှုထမ်းဘဝက စတင်ခဲ့သည် ။ ဦးတင်ထွဋ် သည် အင်ဒိုစစ်တက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အိန္ဒိယပဋိဉာဉ်ခံဘဝသို့ ဝင်ရောက် ရန်အတွက် စစ်တပ်အရာရှိရာထူးကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရှိခဲ့ပြီး မကြာမီမှာပင် ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက် နေချိန်တွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ရနိုင်သလောက် ပြန်လည် စုစည်း၍ ခိုင်မာသည့် ပြည် ထောင်စုအရံတပ်မတေ်ာ (Union Auxiliary Force) ဖွဲ့စည်းရေးတာဝန်ကို သူ့ဖာသာသူ ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် နိုင်ငံ တေ်ာလုပ်ကြံမှုတရားခံ ဂဠုန် ဦးစော နှင့် နောက်လိုက်များကို စစ်ဆေးစီရင်နေသော တရားသူကြီး ဦးကျေ်ာမြင့်၏ အစ်ကို လည်း တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည် ။ ထို့အပြင် သူ့သတင်းစာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဂဠုန်ဦးစောအမှုကို ထိုအချိန်ကပင် ဦးတင်ထွဋ်သည် စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ သူ၏ The New Times of Burma သတင်းစာ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင်များ အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံမှုနှင့် ပတ်သက်သမျှ သဲလွန်စများကို စုဆောင်းရန် စေခိုင်း
ယင်းနောက် နယူးတိုင်းအေ့ာဖ်ဘားမား သတင်းစာတိုက် မှ အိမ်သို့အပြန် ၁၉၄၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နေ့ ည ၉း၃၀နာရီတွင် လူသတ်သမားတစ်ဦးက လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကားရှေ့ခန်းတွင် ထိုင်နေသူ ဦးတင်ထွဋ်၏ ခြေရင်းတွင် ကျရောက်ပေါက်ကွဲကာ နဖူး၊ ဘယ်ဘက်မေး၊ ဘယ်ဘက်ပေါင်၊ ဘယ်ဘက်ဒူး၊ ဘယ်ဘက်ခြေ မျ က်စိ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ဒဏ် ရာ ၈ ချက်ထိကာ မေ့မြောသွားခဲ့ရသည်။ ဦးတင်ထွဋ်နှင့် ယှဉ်ကာ ထိုင်နေသူဗမ့ာကိုယ်ရံတေ်ာတပ်မှ အရာရှိတစ်ဦးနှင့် ယာဉ်မောင်းမောင်အေးဖေတို့မှာ ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့သည်။ သို့သေ်ာလည်း ကားနောက် မှ လိုက် ပါသူ ဂေါ်ရခါးကိုယ်ရံတေ်ာ သီဘဟာဒူး နှင့် ပီဘဟာဒူးတို့မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိ၍ မေ့မြောနေသော ဦးတင်ထွဋ်အား ဆေးရုံသို့ အမြန်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဆရာဝန်များ အားလုံးက အသက်လု ကုသသေ်ာလည်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် ည ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့သည်။ ယနေ့နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သေ်ာလည်း ဦးတင်ထွဋ်အား မည်သူမည် ဝါ လုပ်ကြံခဲ့သည်ဟု ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါချေ ။
ဦးတင်ထွဋ်၏ ကြွင်းကျ န်သော ရုပ်ကလာပ်ကို အာဇာနည်ကုန်း (ယခုအညတရစစ်သည်ဗိမာန်နေရာ)၌ ဗိုလ်စိန်မှန်၊ ဗိုလ်ပီတာတို့နှင့်အတူ ယှဉ်လျက် ဂူသွင်းသြင်္ဂိုဟ်ထားသည်။ နဝတအစိုးရလက်ထက်တွင် အာဇာနည်ကုန်း ၌ အညတရစစ်သည်ဗိမာန် တည်ဆောက်လိုက်သောအကြောင့် ဦးတင်ထွဋ်၏ အုတ်ဂူလည်း ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်၌ ဇနီးဒေါ်သန်းတင်နှင့် သမီး (၃)ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
Credit – သန်းဝင်းလှိုင်၊ မိုးမခဂျာနယ်
နှဈပေါငျး ၇၀ ကြျော ကွာသညျအထိ လကျသညျမပျေါသေးတဲ့ လုပျကွံမှုကွီး
ဦးတငျထှဋျသညျ ကိုလိုနီခတျေ၌ မွနျမာလူမြိုးထဲမှ ပထမဆုံး အိန်ဒိယပဋိဉာဉျခံဝနျထမျး (အိုငျစီအကျဈ)ကို ရှေးခြ ယျခနျ့ထားခွငျး ခံရသူဖွဈသညျ။ ဦးတငျထှဋျကို အဖ အရေးပိုငျ ဦးဖိနျး (K.S.M., A.T.M) အမိ ဒျေါမိမိတို့မှ မွငျးခွံမွို့တှငျ ၁၈၉၅ ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလ ၁ ရကျ နေ့၌ ဖှားမွငျခဲ့သညျ ။ မှေးခငျြး (၇)ယောကျ အနကျ အကွီးဆုံးဖွဈသညျ ။ ညီအဈကို ၄ ဦးစလုံးမှာ အင်ျဂလနျမှ ဘားအကျလော (Bar.at. Law) ဝတျလုံ ဘှဲ့မြားရ၍ ထူးခြှနျထကျမွကျထငျရှားသူမြားဖွဈသညျ။ ဦးတငျထှဋျ၏ ညီနှငျ့ညီမမြားမှာ တရားသူကွီးနှငျ့ ဥပဒေ ပါမောက်ခ ဦးကျြောမွငျ့၊ သံအမတျ ကွီး နှငျ့ ဗဟိုတရားရုံးခြုပျအကြိုးဆောငျ ဦးမွငျ့သိနျး၊ မွနျမာစာပေ မဟာ ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ရနှငျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ကြောကျစာဖတျ ဒျေါခငျမွမူ၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ပါမောက်ခခြုပျနှငျ့ ကမ်ဘာသိ မွနျမာစာပပေညာရှငျ ဒေါကျတာထငျအောငျ၊ ဝိဇ်ဇာဂုဏျထူးနှငျ့ ဘီအီးဒီဘှဲ့ရ ခတျေစမျးစာဆို ဒျေါခငျစောမူ၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျအင်ျဂလိပျစာဌာနမှူး ဒျေါတငျစောမူတို့ ဖွဈကွသညျ။
ဦးတငျထှဋျသညျ ငယျစဉျက ရနျကုနျမွို့ စိနျ့ပေါလျအထကျတနျးကြောငျး၊ ပဲခူးမွို့ အစိုးရအထကျတနျးကြောငျး၊ ရနျကုနျကောလိပျတို့တှငျ ပညာသငျကွားခဲ့သညျ။ ရနျကုနျကောလိပျတှငျ လပိုငျးမြှသာနေ၍ ၁၉၁၁ ခုနှဈတှငျ အင်ျဂလနျဂြူးဝဈကောလိပျ၊ ၁၉၁၄ ခုနှဈတှငျ ကိနျးဘရဈတက်ကသိုလျ ကှငျးနျကောလိပျ၊ ၁၉၁၄ ခုနှဈတှငျ အိုငျယာလနျ ဒဗ်ဗလငျထရီနတီကောလိပျတို့တှငျ ဆကျလကျ ပညာသငျကွားခဲ့သညျ ။ ၁၉၁၅ ခုနှဈတှငျ မကျ ဈသဈထရဈပို စာမေးပှဲကိုလညျးကောငျး၊ ၁၉၁၇ ခုနှဈ အီကောနျောမဈထရဈပို စာမေးပှဲကိုလညျးကောငျး အောငျမွငျခဲ့သညျ။
၁၉၁၆ ခုနှဈတှငျ အင်ျဂလိပျအကျ ဆေး ပွိုငျပှဲ၌ ဟူးဈပရိုကျဆု ရရှိခဲ့သညျ ။ ၁၉၁၇ ခုနှဈတှငျ ကိနျးဘရဈ တက်ကသိုလျ ဘီအဘှေဲ့(ဝိဇ်ဇာဘှဲ့)ကို သင်ျခြာ၊ ဘောဂဗဒေ ဂုဏျ ထူးတို့ဖွငျ့ ရရှိခဲ့သညျ ။ ၁၉၂၀ ပွညျ့ နှဈတှငျ ဒဗ်ဗလငျထရီနတီ ကောလိပျမှ ဘီအေ (တီ၊စီ၊ဒီ)နှငျ့ အမျအေ (မဟာဝိဇ်ဇာ) ဘှဲ့မြား ရရှိသညျ။ ထို့နောကျ ၁၉၂၁ ခုနှဈတှငျ အင်ျဂလနျမဈဒယျတနျပယျလျ ဥပဒကြေောငျးမှ ဘာရဈစတာ (Barrister at Law) ဝတျလုံဘှဲ့ ရရှိခဲ့ သညျ ။ အင်ျဂလနျပွညျတှငျ ပညာသငျကွားနစေဉျ အားကစားဘကျ ၌လညျး ထူးခြှနျသညျ။ ဒါးလျဝဈကောလိပျ (Dulwich college) ရတျဘီအားကစား လကျရှေးစငျ (ပတျဘလဈစကူးလကျဝှခေ့နျြပီယံ)၊ ကိနျးဘရဈ တက်ကသိုလျ ရတျဘီအသငျး ခေါငျးဆောငျနှငျ့ လှလျှေောအသငျး ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ ရှေးခယျြ ခံရသညျ။
၁၉၁၇ ခုနှဈတှငျ မွနျမာတိုငျးရငျးသားမြားထဲမှ အိန်ဒိယစဈတပျကျောမရှငျ အရာရှိအဖွဈ ခနျ့အပျခွငျးခံရသညျ။ ၁၉၁၉ ခုနှဈတှငျ မွနျမာတိုငျးရငျးသားမြားထဲမှ ပထမဆုံး အိန်ဒိယပဋိဉာဉျခံဝနျထမျး (I.C.S) အဖွဈ ရှေးခြ ယျခံရသညျ။ ၁၉၁၉ မှ ၁၉၂၁ အထိ အောကျ ဈဖို့ဒျတက်ကသိုလျ ၌ အလုပျသငျအဖွဈ ပညာသငျခဲ့သညျ ။ ၁၉၂၁ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၁၂ ရကျ နတှေ့ငျ မွနျမာပွညျသို့ ပွနျလညျ ရောကျ ရှိသညျ ။ ၁၉၂၂ တှငျ ပဲခူးတိုငျး ကမာဝဲ မှ ဦးဘိုးမငျး၏သမီး မသနျးတငျ နှငျ့ လကျထပျခဲ့သညျ။
ယငျးနောကျ ၁၉၂၂ ခုနှဈတှငျ ပဲခူးဝနျထောကျ၊ ၁၉၂၄ တှငျ သဈတောဌာန အတှငျးဝနျထောကျ၊ သဈတော ကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး၊ ၁၉၂၅ တှငျ ဘဏ်ဍာရေး အတှငျးဝနျထောကျ၊ ၁၉၂၆ တှငျ အခှနျတျော နှငျ့ သဿ မဓေ စုံစမျးရေးကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး၊ ၁၉၂၇ တှငျ သမဝါယမ တှဲဖကျရီဇစ်စတွာဝနျထောကျအဖွဈ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ။ ၁၉၂၈ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၀ ရကျနမှေ့ ၁၉၃၃ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၇ ရကျနအေ့ထိ အိန်ဒိယနိုငျငံ ဒလေီမွို့နှငျ့ ဆငျးမလားမွို့တှငျ အိန်ဒိယအစိုးရစကျမှုနှငျ့ အလုပျသမား ဌာန အတှငျးဝနျထောကျ၊ ဒုတိယ အတှငျးဝနျ တှဲဖကျအတှငျးဝနျအဖွဈ အမှုထမျးခဲ့သညျ။ ထိုမှတဖနျ ၁၉၃၃ တှငျ ပွညျအရေးပိုငျအဖွဈ လညျးကောငျး၊ ၁၉၃၅ တှငျ အတှငျးဝနျမြားရုံး (နောငျဝနျကွီးမြားရုံး) ဘဏ်ဍာရေးဌာန ဒုတိယ အတှငျးဝနျ အဖွဈလညျးကောငျး ထမျးရှကျခဲ့သညျ။ တဖကျမှလညျး ၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၂ ခုနှဈတိုငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဒုတိယ အဓိပတိအဖွဈ ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။
လနျဒနျရောကျ မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖှဲ့တှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ့ ဦးတငျထှဋျ (ဗိုလျခြုပျနှငျ့ ဦးတငျထှဋျတို့၏ နောကျမှ မကျြမှနျနှငျ့လူသညျ ဂဠုနျဦးစော ဖွဈသညျ။)
၁၉၄၁ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၂၃ ရကျ နတှေ့ငျ နနျးရငျးဝနျ ဂဠုနျဦးစော၏ အတှငျးဝနျအဖွဈ ဂဠုနျဦးစောနှငျ့ အတူ မွနျမ့ာလှတျလပျရေး အရေးဆိုရနျ အင်ျဂလနျပွညျသို့ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ထှကျခှာခဲ့သညျ။ အောကျတို ဘာလ ၁၀ ရကျ နေ့ လနျဒနျမွို့သို့ရောကျ ရှိပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၈ ရကျ နတှေ့ငျ ဗွိတိသြ နှနျးရငျးဝနျ ဆာဝငျစတနျခြာခြီနှငျ့ ဦးစောတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးရာတှငျ အတူတကျ ရောကျခဲ့သညျ။ ခြာခြီနှငျ့ ဦးစောတို့ နှဈနာရီကွာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သျောလညျး မွနျမ့ာအရေး နှငျ့ပတျသကျ၍ ဗွိတိသြ တို့ဖကျ မှ မညျသညျ့ ကတိကိုမှ မပေးခဲ့ခြေ ။ ခြာခြီ၏ တငျးမာသောသဘောထားနှငျ့ အခွားဗွိတိသြှ ခေါငျးဆောငျမြား မရေ မရာပွောဆိုမှုမြားသညျ ဦးစောကို စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစခေဲ့သညျ။
ဦးစောသညျ ဗွိတိနျမှ အမရေိကနျပွညျ ထောငျစုသို့ဝငျ၍ သမ်မတတဖရနျကလငျဒီရူးစဗဲ့အား ဝငျတှရေ့ာတှငျ လညျး ဦးတငျထှဋျသညျ အတူလိုကျပါ ခဲ့ရသညျ။ အမရေိကနျသမ်မတက ဗွိတိသြ ကိုလိုနီနယျတဈခု၏ အရေး အရာမြားတှငျ ဝငျရောကျ စှကျဖကျရနျ လကျတှနျ့နသေညျ့ သဘောထားကို သိရပွီးနောကျ ဦးစောသညျ ဦးတငျထှဋျအားခနျြထား၍ အမရေိကနျရှိ ဂပြနျသံရုံးမှ ကောငျစဈဝနျအား တကိုယျတျော ဝငျရောကျ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ ဦးစောသညျ အမရေိကနျမှအပွနျ ပျေါတူဂီနိုငျငံ လဈစဘှနျးမွို့ရှိ ဂပြနျသံရုံးမှ ကောငျစဈဝနျ ကို တဦးတညျး တှဆေုံ့ခဲ့ပွနျသညျ။ ဦးစောနှငျ့ ဂပြနျကောငျစဈဝနျတို့ ပွောဆိုခဲ့သမြှဗွိတိသြှ ထောကျလှနျးရေးက ကွားဖွတျ ဖမျးယူပွီး စကားဝှကျမြားဖျောထုတျ ၍ လနျဒနျအစိုးရထံ ပွနျပို့ခဲ့သညျ။
ဦးစောနှငျ့ ဂပြနျကောငျစဈဝနျတို့ ပွောဆိုခကျြအကဉျြးခြုပျမှာ ဂပြနျက မွနျမာနိုငျငံကို ကြူးကျြော ဝငျရောကျ လြှငျ မွနျမာတိုငျးရငျးသားတို့က ဗွိတိသြ တို့ကို ဂပြနျတို့နှငျ့ပူးပေါငျး၍ ထကွှပုနျကနျလိမျ့မညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ့အနဖွေငျ့ ဂပြနျကို တတျ နိုငျသမြှ အကူအညီပေးမညျဟူ၍ ဖွဈသညျ ။ ဗွိတိသြ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက ဦးစောနှငျ့ ဦးတငျထှဋျ နှဈဦးကို ဖမျးရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီး ဦးစောတို့ စီးလာသောလယောဉျ ပါလကျစတိုငျးပွညျ (ယခုအစ်စရေးနိုငျငံ) ဟိုငျဖာမွို့သို့ ၁၉၄၂ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ လယောဉျဆငျး သညျနှငျ့ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးလိုကျလသေညျ။ ထို့နောကျ ဦးစောအား အာဖရိကတိုကျ ယူဂနျဒါနိုငျငံသို့ ပို့လိုကျပွီး ဦးစော သညျ စဈအတှငျးကာလတဈလြှကျေ ၁၉၄၆ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂၅ ရကျ နအေ့ထိ အထိနျးသိမျးခံခဲ့ရသညျ။
ဦးတငျထှဋျကိုမူ ဗွိတိသတြို့က ပွနျလှတျ ပေးပွီး ၁၉၄၂ ခုနှဈ မလေ ၂၀ ရကျ နတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံမှ ဆုတျခှာ လကျြ အိန်ဒိယနိုငျငံ ဆငျးမလားမွို့၌ ဖှဲ့စညျးထားသော ဆာဒျေါမနျစမဈ၏ စဈပွေးအစိုးရအဖှဲ့၌ သှားရောကျ ပူးပေါငျးစသေညျ။ သို့ဖွငျ့ ဦးတငျထှဋျသညျ ၁၉၄၂ ခုနှဈမှ ၁၉၄၆ ခုနှဈအထိ မွနျမာပွညျ စဈပွေး ဆငျးမလား အစိုးရအဖှဲ့၏ ပွနျလညျထူထောငျရေးဆိုငျရာ အကွံပေးအရာရှိအဖွဈ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ။ ၁၉၄၅ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၆ ရကျ နမှေ့ ၇ ရကျ နအေ့ထိ သီရိလင်ျကာနိုငျငံ ကန်ဒီမွို့၌ အရှတေ့ာငျအာရှဆိုငျရာ မဟာမိတျတပျမြား၏ စဈသနောပတိခြုပျ လောဒျ့လူဝီမောငျ့ဘကျတနျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှ ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျး ခေါငျးဆောငျသော မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ စဈပွေးအစိုးရ အကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ ဦးတငျထှဋျလညျး တကျရောကျခဲ့သညျ။
၁၉၄၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘုရငျခံဆာဒျေါမနျစမဈသညျ မွနျမာပွညျအစိုးရ၏ အကွံပေးအရာရှိ ဦးတငျထှဋျကို ဖဆပလအဖှဲ့ခြုပျသို့ စလှေတျပွီး ဘုရငျခံအမှုဆောငျကောငျစီတှငျ အဖှဲ့ဝငျ ၁၅ ဦးအစား ၁၁ ဦးသာခနျ့ထားမညျ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားစသေညျ။ ၁၉၄၆ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျ နကေ့ ဗွိတိသအြစိုးရက ဦးတငျထှဋျအား Order of British Emperor (O.B.E) ခြီးမွှငျ့ခဲ့သညျ။ ၁၉၄၆ ခုနှဈတှငျ အိုငျစီအကျဈ ဝနျထမျးဘဝမှ နှုတျထှကျ၍ The Burma Review ဂြာနယျ နှငျ့ New Time of Burma သတငျး စာကို အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ထုတျဝခေဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ၁၉၄၆ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ဖဆပလအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးဦး ဆောငျ၍ ဘုရငျခံအမှုဆောငျကောငျစီ ဖှဲ့စညျးသောအခါ ဦးတငျထှဋျ သညျ ဘုရငျခံခနျ့ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ အခှနျတျောဌာန၌ ဝနျကွီးဖွဈလာခဲ့သညျ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂ ရကျ နတှေ့ငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ခေါငျးဆောငျသညျ့ မွနျမာကိုယျ စားလှယျအဖှဲ့ ဗွိတိသြ အစိုးရနှငျ့ မွနျမ့ာလှတျလပျရေးကိစ်စဆှေးနှေးရနျ သှားရောကျ သောအခါ ဦးတငျထှဋျသညျ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈ လိုကျပါသှားခဲ့သညျ။
၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလတှငျ ပငျလုံစာခြုပျ ခြုပျဆိုရေးအတှကျ မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖွဈ တကျရောကျ ခဲ့ သညျ ။ ထိုနှဈမှာပငျ တောငျတနျးဒသေ စုံစမျးရေးကျောမတီ (Frontier Area Enquiry Committee)တှငျ မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖွဈ သခငျနု၊ ဗိုလျ ခငျမောငျကလေး၊ ဦးကြျောငွိမျးတို့နှငျ့အတူ ပါဝငျဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဧပွီလ ၉ ရကျ နတှေ့ငျ တိုငျးပွုပွညျပွုလှတျတျော ရှေးကောကျ ပှဲတှငျ ဟင်ျသာတမွို့မှ ဝငျရောကျ ယှဉျ ပွိုငျရာ အနိုငျရရှိခဲ့သညျ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇှနျလတှငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမေူကွမျးရေးဆှဲရေး ကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျ၊ အခွခေံဥပဒအေခြောကိုငျ ကျောမတီအဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၇ ရကျနတှေ့ငျ လနျဒနျ မွနျမာပွညျ ဆိုငျရာ ကျောမရှငျနာမငျးကွီးအဖွဈ ဆောငျရှကျသညျ။
ထို့နောကျ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၂၈ ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘုရငျခံဆာဟူးဘတျဈရနျ၏ အမှုဆောငျ ကောငျစီ (ဝနျကွီးအဖှဲ့)၌ ဌာနလကျကိုငျမရှိ ဝနျကွီးအဖွဈ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလတှငျ သခငျနု ဦး ဆောငျသော ကွားဖွတျအစိုးရအဖှဲ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးအဖွဈလညျးကောငျး၊ ၁၉၄၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ အစိုးရ၏ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဖွဈလညျး ကောငျး ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ။
၁၉၄၈ သွဂုတျလ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဖွဈမှ နှုတျထှကျ၍ ဗိုလျမှူးခြုပျရာထူးဖွငျ့ အရနျလကျနကျတပျမြား၏ စဈဦးစီးခြုပျအဖွဈ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ ။ ဦးတငျထှဋျ ကဲ့သို့ ထိပျတနျးနိုငျငံ့ဝနျထမျးတဈဦးနှငျ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ဝနျကွီးတဈဦးအား စဈတပျ၏မွငျ့မားလှသော ရာထူးတဈခု ပေးအပျခံရခွငျးမှာ ထူးဆနျးကောငျး ထူးဆနျး ပလေိမျ့မညျ ။ သို့သျော သူ့ဘဝသညျ ငယျစဉျကပငျ စဈမှုထမျးဘဝက စတငျခဲ့သညျ ။ ဦးတငျထှဋျ သညျ အငျဒိုစဈတက်ကသိုလျ မှ ဘှဲ့ရခဲ့ပွီး အိန်ဒိယပဋိဉာဉျခံဘဝသို့ ဝငျရောကျ ရနျအတှကျ စဈတပျအရာရှိရာထူးကို စှနျ့လှတျ ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးရှိခဲ့ပွီး မကွာမီမှာပငျ ပွညျတှငျးစဈမီးတောကျ နခြေိနျတှငျ စဈမှုထမျးဟောငျးမြားကို ရနိုငျသလောကျ ပွနျလညျ စုစညျး၍ ခိုငျမာသညျ့ ပွညျ ထောငျစုအရံတပျမတျော (Union Auxiliary Force) ဖှဲ့စညျးရေးတာဝနျကို သူ့ဖာသာသူ ကမျးလှမျးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ သူသညျ နိုငျငံ တျောလုပျကွံမှုတရားခံ ဂဠုနျ ဦးစော နှငျ့ နောကျလိုကျမြားကို စဈဆေးစီရငျနသေော တရားသူကွီး ဦးကျြောမွငျ့၏ အဈကို လညျး တိုကျတိုကျ ဆိုငျဆိုငျ ဖွဈနခေဲ့သညျ ။ ထို့အပွငျ သူ့သတငျးစာတှငျ အသုံးပွုရနျအတှကျ ဂဠုနျဦးစောအမှုကို ထိုအခြိနျကပငျ ဦးတငျထှဋျသညျ စူးစမျးလလေ့ာခဲ့သညျ။ သူ၏ The New Times of Burma သတငျးစာ အယျဒီတာ အဖှဲ့ဝငျမြား အား ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးလုပျကွံမှုနှငျ့ ပတျသကျသမြှ သဲလှနျစမြားကို စုဆောငျးရနျ စခေိုငျး
ယငျးနောကျ နယူးတိုငျးအေ့ာဖျဘားမား သတငျးစာတိုကျ မှ အိမျသို့အပွနျ ၁၉၄၈ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျ နေ့ ည ၉း၃၀နာရီတှငျ လူသတျသမားတဈဦးက လကျပဈဗုံးဖွငျ့ ပဈခတျလုပျကွံမှုကွောငျ့ ကားရှခေ့နျးတှငျ ထိုငျနသေူ ဦးတငျထှဋျ၏ ခွရေငျးတှငျ ကရြောကျပေါကျကှဲကာ နဖူး၊ ဘယျဘကျမေး၊ ဘယျဘကျပေါငျ၊ ဘယျဘကျဒူး၊ ဘယျဘကျခွေ မြ ကျစိ အပါအဝငျ စုစုပေါငျး ဒဏျ ရာ ၈ ခကျြထိကာ မမွေ့ောသှားခဲ့ရသညျ။ ဦးတငျထှဋျနှငျ့ ယှဉျကာ ထိုငျနသေူဗမ့ာကိုယျရံတျောတပျမှ အရာရှိတဈဦးနှငျ့ ယာဉျမောငျးမောငျအေးဖတေို့မှာ ဒဏျရာအနညျးငယျ ရရှိခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး ကားနောကျ မှ လိုကျ ပါသူ ဂျေါရခါးကိုယျရံတျော သီဘဟာဒူး နှငျ့ ပီဘဟာဒူးတို့မှာ ဒဏျရာပွငျးထနျစှာ ရရှိခဲ့ကွသညျ။
ဒဏျရာပွငျးထနျစှာရရှိ၍ မမွေ့ောနသေော ဦးတငျထှဋျအား ဆေးရုံသို့ အမွနျတငျပို့ခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော ဆရာဝနျမြား အားလုံးက အသကျလု ကုသသျောလညျး ၁၉၄၈ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျ ည ၇ နာရီ ၃၅ မိနဈတှငျ ကှယျလှနျ သှားခဲ့သညျ။ ယနနှေ့ဈပေါငျး ၇၀ ကွာမွငျ့ပွီဖွဈသျောလညျး ဦးတငျထှဋျအား မညျသူမညျ ဝါ လုပျကွံခဲ့သညျဟု ထှကျပျေါလာခွငျးမရှိခဲ့ပါခြေ ။
ဦးတငျထှဋျ၏ ကွှငျးကြ နျသော ရုပျကလာပျကို အာဇာနညျကုနျး (ယခုအညတရစဈသညျဗိမာနျနရော)၌ ဗိုလျစိနျမှနျ၊ ဗိုလျပီတာတို့နှငျ့အတူ ယှဉျလကျြ ဂူသှငျးသွင်ျဂိုဟျထားသညျ။ နဝတအစိုးရလကျထကျတှငျ အာဇာနညျကုနျး ၌ အညတရစဈသညျဗိမာနျ တညျဆောကျလိုကျသောအကွောငျ့ ဦးတငျထှဋျ၏ အုတျဂူလညျး ဖကျြဆီးခံလိုကျရသညျ။ ကှယျလှနျခြိနျ၌ ဇနီးဒျေါသနျးတငျနှငျ့ သမီး (၃)ဦး ကနျြရဈခဲ့သညျ။
Credit – သနျးဝငျးလှိုငျ၊ မိုးမခဂြာနယျ